TOEIC, အတွေ့အကြုံများ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -toeictw.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan TOEIC, အတွေ့အကြုံများ ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - 7-1
Sophomore ကျောင်းသား Janine
လည်စည်း'ငါ၏အ TOEIC ရမှတ်တိုးတက်မူထူးခြားတဲ့အင်္ဂလိပ်သင်တန်း့စေတော်မူပြီ.စအဦး၌,ငါသာ TOEIC အတွက် 300 ခန့်သွင်းယူ.အပတ်စဉ်သဒ္ဒါယူပြီးပြီးနောက်,သင်တန်းများနှင့်မြောက်မြားစွာလေ့ကျင့်ခန်းကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်နားထောင်ခြင်း,ငါ TOEIC အတွက် 760 ရတယ်.အင်္ဂလိပ်ထိရောက်မှုတိုးတက်စေရန်အခမဲ့အချိန်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်,ငါနေ့တိုင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူများ၏အလေ့အထသို့ရ!
多益推薦	| TOEIC Experience